07 Farshaxanka reer Nederland - Ku soo dhowow Nederland
Nederland waxaa ka soo baxay niman farshaxanka ku caan ah oo aad adduunka looga yaqaano. Wakhtigii farshaxanku aad u korayna wuxuu ahaa Qarningii Dahabiga ahaa. Qaar kamid ah nimanka ugu caansan farshaxamiinta Nederland waxay kala yihiin: Jan van Eyck iyo Rogier van der Weyden (dhammaadkii qarniyadii dhexe), Rembrandt van Rijn, Jan Steen, Johannes Vermeer (Qarnigii Dahabiga), Vincent van Gogh (Qornigii 19-aad) iyo Piet Mondriaan (Qarnigii 20-aad).
Dad badan oo reer Nederland ah ayaa aad ugu faraxsan inay nimankan farshaxamiinta ahi ka dhasheen Nederland. Farshaxan badan oo qarniyadii hore la sawiray ayaa ku saabsan arrimo diinta Masiixiyadda ah. Taasina waa caqli gal, waayo berigii hore Nederland waxay ahayd waddan Masiixi ah. Sawiradii ay sameeyeen farshaxamiinta reer Nederland waxaa hadda laga heli karaa guryaha ugu heerka sareeya ee farshaxanka lagu kaydiyo (musea), ee ku kala yaala waddamo ay kamid yihiin Talyaaniga, Belgiumka, Ingiriiska, Isbaanishka, Maraykanka, Ruushka iyo waddamo badan oo kale.
Guryahan farshaxanku lagu daawado iyo dad gaar ahiba waxay diyaar u yihiin inay lacag badan ka bixiyaan sawiradan. Hal sawir-farshaxameed oo uu sawiray Vincent van Gogh ayaa lagu baayacay 82,5 malyuun oo doolar. Kaasoo ka dhigaya mid kamid ah sawir-farshaxameedyadii ugu qaalisanaa taariikhda.
Hoos ayaad ka arki kartaa qaar kamid ah sawir-farshaxameedyada ugu caansan ee Nederland iyo sharaxaad gaaban oo laga bixiyey.
Subpages (5): 7.1 Jan van Eyck 7.2 Rembrandt 7.3 Vincent van Gogh 7.4 Pieter Mondriaan Nederlandse vertaling